अव पार्टी भित्र शुद्धीकरण अभियान सुरु हुन्छ : बरिष्ठ नेता नेपाल
रिपोर्ट नेपाल | 2019 May 22 | 08:11 am	211
लामो समयसम्म नेकपा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्दै प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाली सकेका नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रष्ट वक्त र प्रभावशाली नेताका रुपमा परिचित छन् । आफूलाई लागेको कुरा प्रष्टसँग राख्ने र चित्त नबुझेका कुरालाई कोही रिसाउसकी खुशी होस् धक नमानी राख्न सक्ने नेता माधव कुमार नेपालसँग रिपोर्ट नेपालका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
तीन महिना भित्र एकता प्रकृया पूरा गर्ने भनिएको नेकपाको सबै एकता र जिम्मेवारी आहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नुको खास कारण के होला ? पार्टी एकताको ढिलाइको कारण खोज्दै जाने हो भने त्यसले विवाद निम्त्याउँछ त्यसैले म त्यता पट्टी जान चाहान्न । अहिले कारण खोजेर आरोप प्रत्यारोप गर्ने र विवाद बढाउने पक्षमा म छैन । तपाईले भने जस्तै एकता ढिला भएकै हो ।
नेतृत्वलाई भन्न खोज्नु भएको त होइन ?
कामको जिम्मा लिएर अल्झाएर राख्ने जो कोहीलाई मैले भनेकै हुँ ।
तपाईले सुरुमा अध्यक्षको आलोचना गर्ने पछि लुसुक्क गएर सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ त ?
आरोप मैले पनि तपाईलाई लगाए भई हाल्यो । होइन भने माधव नेपाल सधै नराम्रो कामको डटेर बिरोध गर्ने र सकरात्मक कामका लागि सम्झौता गर्ने मान्छे भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
पार्टी भित्र चरम आन्तरिक द्वन्द्व छ भन्ने सुनिन्छ के हो ?
लोकतन्त्रमा आपसी पेट माझामाझ हुनु स्वभाविक हो । हरेका असम्भवलाई चिर्दै सम्भावना तिर अघि बढ्ने हो । अहिले हामी सम्भावना तिर अगाडी बढी रहेका छौं ।
पार्टी एकतामा तपाईका भूमिका कस्तो रह्यो र तपाईले भनेजस्तै भयो त ?
लामो इतिहास बोकेको नेकपा एमाले र दश वर्षे जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीबीचको एकतामा मेरो मात्रै नभएर सबै नेता कमरेडहरुको भूमिका रहेको छ । यो एकताको जस(यस) कसैले एक्लै लिन खोज्छ भने त्यो मुर्खता हो । एकतामा मेरो चित्त बुझेको छ । मोटामोटी रुपमा भन्नुपर्दा मैले भनेजस्तो गरी एकता भएको छ ।
पार्टी भित्रको गुट उपगुट हट्ने भन्दा पनि अझै मौलाउदै गएको छ भन्ने सुनिन्छ सत्य के हो ?
तपाईले सुनेको एकहदसम्म ठिकै पनि हो । अव पार्टी भित्रको गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्दै पार्टीभित्र शुद्धिकरण अभियान चलाइन्छ । पार्टी भित्र भ्रष्ट्राचार, डन प्रवृत्ति भए पनि अव जरैबाट त्यसलाई समाप्त पारिन्छ ।
अहिले पार्टी डन प्रवृत्तिले चलेको छ र ?
चलेको भए अव समाप्त पारिन्छ । धेरै मेहनत, त्याग तपस्याबाट आज यति ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हो ।
लगभग एकता प्रकृया त अन्तिम अन्तिम टुङ्गोमा पुग्यो, महाधिवेशन कहिलेसम्म हुन्छ त ?
सबै जिल्लाको अधिवेशन गर्नु पर्यो, जनपर्गीय संगठनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो यि सबै प्रकृया पूरा गर्दा एक वर्ष अझै लाग्ला । अर्को छ महिना भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अवको डेढ वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ ।
पार्टी भित्र डनवाद र धनवादको बाहुल्यता रहेको मानिन्छ नि के हो ?
हाम्रो पार्टी नेकपा भित्र यस्ता वादहरुको बाहुल्यता छैनन् । पार्टी भित्र जनतालाई भन्दा आफन्तलाई माया गर्ने केही व्यक्ति हुन सक्छन् । अव हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्झाई बुझाई गर्छौ त्यति गर्दा पनि नमानेर अटेर गरे भने त्यस्ता विकृति गर्नेहरुलाई हटाउछौं ।
सरकारको काम कारबाही बारे तपाईको के भनाई छ ?
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले वितेका समयमा कानुन निर्माण देखि संघिय संरचना बनाउदै समय बिताएको छ । एक वर्षको छोटो अवधिमा केही पनि सोचे जस्तो काम हुन सक्दैन । अव सरकारले सबैको सल्लाह लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
तपाईले सरकारको प्रशंसा गर्नु भयो तर जनता त सरकार प्रति निरास छन् त ?
निरास जनतालाई खुशी पार्न खाल्डो पारेर छोड्ने होइन कि सडक बनाइदिनुस् जनता शुखी भइहाल्छन् । विभिन्न कामको टेण्डरबाट ठेक्का प्राप्त गरेका ठेकेदारलाई कस्ने काम गरियो भने जनता शुखी हुन्छन् । राज्यबाट करोडौं पेश्की लिन तर काम नगरी जग्गा दलाली गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुस् जनता शुखी हुन्छन् । ठेकेदारलाई पहिल्यै दिने गरिएको पेश्की रकम रोकेर तोकीएको समयमा काम समाप्त नगरे जरिवाना ठोकौं त जनता शुखी भइहाल्छन् ।